Banyere Anyị - Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
SHANGHAI DADA Electric CO., LTD e guzobere na 2004, kwetara dị ka otu n'ime ndị kasị akwanyere ùgwù mba na-emepụta ala voltaji sekit emebi na China. Ngwaahịa dịgasị iche iche na-ekpuchi ndị na-agbaji elekere (MCB), ihe nkwụsịtụ sekit ugbu a (RCCB), Ihe Mgbapụ Oge A Na-ahụ Maka Ihe Nlekọta Na-ahụkarị (RCBO), ihe nkedo ndị na-akpụzi (MCCB), AC Contactor, na-ebugharị ọkụ ọkụ, Mkpuchi Mgbapụ Mgba ọkụ , wdg.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ CDADA?
Otu a, nke gunyere ulo oru 3, nwere mpaghara mmeputa nke 52,400m² ma were ihe kariri ndi oru 500.
Anyị na-eji a punching ogbako, Ọgwụ na ịkpụzi ogbako, haịdrọlik omumuihe, ntụpọ ịgbado ọkụ na riveting ogbako, nzukọ ogbako, na àgwà nnyocha ogbako na-ezukọ niile nke anyị àgwà management mkpa.
Ndị ọrụ 400 na-arụ ọrụ site na ndị ọrụ 400 gụnyere ndị ọrụ teknụzụ 32, yana ndị isi njikwa 30. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ngwa eletrik eletrik.
N'ihi ụlọ ọrụ a dị elu, anyị karịrị mmepụta nke 800,000 MCCB na 5,000,000 MCB nkeji.
Anyị circuit emebi ngwaahịa na-akpan iji izute dịgasị iche iche nke echichi mkpa nke obere ọrụ n'ụzọ nile ulo oru transformer substations na ike nkesa ụgbọ. Ga ahụ ngwaahịa anyị ka etinyere na igwe eji egwe ihe, ebe ana enweta mmanụ, ụlọ ọgwụ, ọdụ ụgbọ oloko, ọdụ ụgbọ elu, ebe mgbakọ, ụlọ ọrụ ọfịs, ebe mgbakọ, ebe ihe nkiri, ụlọ elu igwe, yana ụlọ ọ bụla nwere ọkụ eletrik chọrọ.
Dada ka raara onwe ya nye maka mmepe na n'ichepụta ndi okirikiri. Anyị enweela ọganihu gbasaa azụmahịa ụwa anyị karịa mba 20 na mpaghara gafee Europe, America, Middle East, Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Ruo ọtụtụ afọ, anyị sonyeere na bidding na oru ngo maka Chinese mba okporo, ewu anyị ụlọ ọrụ ika na ịgbasa anyị ike na-eru. Anyị na-aga n’ihu iru ebumnuche a site na isoro ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke “Chee echiche karịa maka ndị ahịa ma mee nke ọma maka onye ahịa”. N'ikpeazụ, anyị na-achọ ịbawanye ọgụgụ isi nke njikwa ọkụ eletrik ma anyị gbalịsiri ike ịghọ onye ndu ụwa na ngwaahịa ngwaahịa eletriki. Dada na-ele anya ịgbanwe usoro eletriki nke China, kamakwa nke ụwa.
• CDADA raara onwe ya nye inye ngwaahịa di elu site n’inye ha ihe site n’aka ndi n’emeputa ya na inye ndi ahia ahia nke mbu.
• Anyị na-agba mbọ iji na-enye ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ ngwaahịa ndị na-emebi ihe dị elu iji nyere aka na-asọmpi n'ahịa ahịa taa.
• Anyị R&D otu lekwasịrị anya na-emepe emepe otutu circuit emebi technology iji hụ na ndị ahịa anyị nwere ohere ka ndị kasị mma ngwaahịa.
• Ndị ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ iri atọ nke ahụmịhe na-enye ndị ahịa ndị ahịa ahaziri nke ọ bụla.